Olee otú Ọkụ iPhoto ngosi mmịfe ka DVD on Mac (Mavericks gụnyere)
iPhoto ka ọ dị mfe ịkọrọ ndụ dị oké ọnụ ahịa oge. Na ya, ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ narị foto slideshows na ikwu n'ụzọ na music. Otú ọ dị, kere DVD ngosi mmịfe naanị ike anya n'ime iPhoto. Ọ na-apụghị enịm ke kọmputa gị ma ọ DVD mbanye. Chọrọ ọkụ iPhoto ngosi mmịfe ka DVD maka egwu na a n'ụlọ DVD ọkpụkpọ ma ọ bụ TV? A nkuzi ewebata a siri ike na mfe na-eji iPhoto ka DVD Onye Okike: Wondershare DVD Onye Okike maka Mac nke na-enyere gị ọkụ iPhoto ngosi mmịfe ka DVD na magburu onwe ya mma.
Jiri ya tụnyere iDVD, ọ sụgharịa ọzọ abịakọrọ faịlụ mgbe agbakwunye ederede, menu na ndị ọzọ na ọdịnaya na mbụ slideshows (nke pụtara nta file size), na-enwu ọkụ niile ọdịnaya ka DVD na 6X ngwa ngwa ọsọ. Isiokwu na-esonụ na-akọwa otú ike video DVD si iPhoto slideshows nzọụkwụ site nzọụkwụ. Mbụ, ị nwere ike ibudata software ebe a.
Cheta na: DVD Onye Okike maka Mac nwere ike ire niile ewu formats dị ka AVI, MOV, WMV, MTS, AVCHD, na MKV ukwuu dakọtara DVD formats. Ị nwere ike ịhọrọ ma a ọkọlọtọ definition PAL DVD dere 720 × 576 na 25 fps MPEG-2 video ma ọ bụ a ọkọlọtọ definition NTSC DVD dere 720 × 480 na 29,97 fps MPEG-2 video.
Nzọụkwụ 1. Tinye ngosi mmịfe video ka software
Mgbe ị gụsịa eme foto ngosi mmịfe, pịa File> Export> ngosi mmịfe na mgbe ahụ họrọ QuickTime Movie mbupụ iPhoto ngosi mmịfe ka MOV maka ọkụ.
Mgbe ahụ, ikpuru na dobe QuickTime videos ozugbo na isi omume windows wee pịa "↑" na "↓" megharia iji. Ị na-ekwe ka ịhụchalụ gị videos na ịgbanwe video olu dị ka amasị gị.
Nzọụkwụ 2. Mee omenala DVD menu n'ihi na gị DVD (Nhọrọ)
Pịa "NchNhr" button na ala nri ala nke isi interface ịbanye menu edezi window. Ebe a, ihe karịrị 90 tent nke free animated na static DVD menu ekwekọghị dị. Iji mee ka a omenala menu, dị nnọọ pịa NchNhr ịhọrọ a kwesịrị ekwesị menu ịke maka gị DVD, wee hazie ya dị ka gị mkpa. Ọ bụrụ na ị adịghị mkpa ọ bụla DVD template, nanị họrọ "Ọ dịghị NchNhr".
Nzọụkwụ 3. Preview na-amalite ọkụ
Ugbu a ị na fọrọ nke nta mere. Pịa "Preview" na-elele videos bụrụ na i nwere ike mma ya na a ụfọdụ ụzọ. Ọ bụrụ na niile na-aga dị ka ị na-amasị, dị nnọọ pịa Ọkụ ka ọkụ iPhoto ngosi mmịfe ka DVD. Ị nwere ike ọkụ disks ma ọ bụ chekwaa ISO oyiyi faịlụ ma ọ bụ mepụta DVD nchekwa. The TV ọkọlọtọ: NTSC na PAL nhọrọ ndị dịnụ na ihe ike n'ihi gị kpọmkwem mkpa.
DVD Onye Okike maka Mac-akwado ndị niile na-ewu ewu recordable diski ụdị: DVD-5 na DVD-9; DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-R DL, DVD-Ram. Na-egwu kere DVD ọma na a DVD ọkpụkpọ, biko mee ka n'aka na diski bụ dakọtara na gị DVD Player. Na eme ka ahụ n'aka ndị DVD na-kere ke otu TV ọkọlọtọ na DVD ọkpụkpọ.
Ọ bụ ya! Na Wondershare DVD Onye Okike maka Mac, ọ bụ ezigbo mfe atụgharị iPhoto ngosi mmịfe faịlụ ka DVD na mgbe ahụ na-enwe a àgwà ezinụlọ oge na n'ụlọ gị gị na DVD ọkpụkpọ ma ọ bụ TV. Malite ugbu a!
Ndị ọzọ DVD ọkụ software maka Mac
Wondershare Video Converter Ultimate Ike ka ị na ozugbo ọkụ DVD ọ bụla na video faịlụ na ala. Ọtụtụ free na jụụ DVD menu ndebiri na-nyere, nakwa dị ka niile nkịtị edezi ngwaọrụ dị ka cropping, ọnwụ, trimming, isonyere, n'usoro n'usoro, na-agbakwunye ndabere music, foto, watermark wdg na-ẹdude. Dị nnọọ hazie ma ọ bụ ọkụ gị DVD na nkeji. Mụtakwuo >>
Apa ọkụ bụ ike ngwa na mfe na-eji video ngwa na-enyere gị ike a dịgasị iche iche nke video discs, si VideoCD ka DVD-Video discs, na DivX discs. Ị nwekwara ike ịhọrọ a wuru na-DVD menu ma ọ bụ ike gị onwe gị na ọbụna ịtọ nhọrọ maka àgwà na size. Mụtakwuo >>
LiquidCD a isi video ọkụ software, na-elekwasị anya tumadi na ndị na-ubé ọzọ oru chọrọ. Dị ka ọkụ, ọ na-ekwe ka ị na-ọkụ fọrọ nke nta ọ bụla CD na DVD media. Mụtakwuo >>
Olee otú Ọkụ Podcast ka DVD
Olee otú Ọkụ Netflix Movies ka DVD
Olee otú iji tọghata Flash FLV Videos ka DVD
Olee otú ịkọrọ na ọkụ iMovie ka iDVD
Wedding DVD ngosi mmịfe - Mee zuru okè Wedding DVD ngosi mmịfe na Clicks
Top nrụọrụ Mee CD Ekpuchi Online
> Resource> DVD> Olee Ọkụ iPhoto ngosi mmịfe ka DVD na Mac (Yosemite gụnyere)